38 Zvino akagadzira atari yechinopiwa chinopiswa nomuti womubayamhondoro. Yakanga yakareba makubhiti mashanu, yakafara makubhiti mashanu, iine mativi mana akaenzana, uye yakakwirira makubhiti matatu.+ 2 Akabva agadzira nyanga dzayo+ pamakona ayo mana. Nyanga dzayo dzakanga dzakabuda pairi. Akazoifukidza nemhangura.+ 3 Pashure paizvozvo akagadzira midziyo yose yeatari, makeni nemafoshoro nendiro, maforogo nemidziyo yokuisira moto. Akagadzira midziyo yayo yose nemhangura.+ 4 Akagadzirirawo atari sefa yakarukwa nesimbi yemhangura, pasi pomukombero wayo, pasi nechepakati payo.+ 5 Akabva aumba marin’i mana pamakona mana pedyo nesefa yesimbi yemhangura, kuti abate matanda. 6 Pashure paizvozvo akagadzira matanda omubayamhondoro akaafukidza nemhangura.+ 7 Akabva apinza matanda acho mumarin’i aiva kumativi eatari kuti ashandiswe kuitakura.+ Akaigadzira riri bhokisi remapuranga risina chinhu.+ 8 Akabva agadzira bheseni remhangura+ nechigadziko charo chemhangura, achishandisa magirazi evashandikadzi vaiita basa rakarongwa pasuo retende rokusanganira.+ 9 Zvino iye akagadzira chivanze.+ Kurutivi rwakatarisana neNegebhu, kumaodzanyemba, jira rechivanze rakanga rakarembera rakanga rakagadzirwa nerineni yakanaka kwazvo yakakoswa, makubhiti zana.+ 10 Mbiru dzaro makumi maviri nezvigadziko zvaro zvaiva zvemhangura. Hoko dzembiru dzacho nezvokuzvibatanidza nazvo zvaiva zvesirivha.+ 11 Kurutivi rwokuchamhembe kwaivawo nemakubhiti zana. Mbiru dzaro makumi maviri nezvigadziko zvaro makumi maviri zvaiva zvemhangura. Hoko dzembiru dzacho nezvokuzvibatanidza nazvo zvaiva zvesirivha.+ 12 Asi kurutivi rwokumavirira jira racho rakanga rakarembera raiva makubhiti makumi mashanu. Mbiru dzaro dzaiva gumi uye zvigadziko zvaro zvaiva gumi.+ Hoko dzembiru dzacho nezvokuzvibatanidza nazvo zvaiva zvesirivha. 13 Kurutivi rwokumabvazuva nechokunobuda zuva kwaiva nemakubhiti makumi mashanu.+ 14 Jira rakanga rakarembera raiva makubhiti gumi nemashanu kurutivi rumwe. Mbiru dzaro dzaiva nhatu uye zvigadziko zvaro zvaiva zvitatu.+ 15 Uye kune rumwe rutivi, kuno nokudivi iro regedhi rechivanze, jira rakanga rakarembera raiva makubhiti gumi nemashanu. Mbiru dzaro dzaiva nhatu uye zvigadziko zvaro zvaiva zvitatu.+ 16 Jira rose rechivanze rakanga rakarembera kumativi ose rakanga rakagadzirwa nerineni yakanaka kwazvo yakakoswa. 17 Zvigadziko zvembiru dzacho zvaiva zvemhangura. Hoko dzembiru dzacho nezvokudzibatanidza nazvo zvaiva zvesirivha, uye dzakanga dzakafukidzwa nesirivha pamusoro padzo, uye paiva nezvokudzibatanidza nazvo zvesirivha nokuda kwembiru dzose dzechivanze.+ 18 Chinhu chinovhara pagedhi rechivanze chakanga chakagadzirwa nomuruki, neshinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi nerineni yakanaka kwazvo yakakoswa,+ uye chakanga chakareba makubhiti makumi maviri, chose zvacho chakakwirira makubhiti mashanu kuenzana nejira rechivanze rakanga rakarembera.+ 19 Mbiru dzacho ina nezvigadziko zvadzo zvina zvaiva zvemhangura. Hoko dzadzo dzaiva dzesirivha uye misoro yadzo nezvokudzibatanidza nazvo zvakanga zvakafukidzwa nesirivha. 20 Hoko dzose dzetende retebhenekeri nedzechivanze kumativi ose dzaiva dzemhangura.+ 21 Zvinotevera ndizvo zvinhu zvetebhenekeri zvakaverengwa, iyo tebhenekeri yeChipupuriro,+ zvakaverengwa Mosesi arayira, sebasa revaRevhi+ vaitungamirirwa naItamari+ mwanakomana womupristi Aroni. 22 Bhezareri+ mwanakomana waUrai mwanakomana waHeri wedzinza raJudha akaita zvose zvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 23 Aiva naOhoriyabhi+ mwanakomana waAhisamaki wedzinza raDhani, mhizha, munhu aimenda uye airuka neshinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi nerineni yakanaka kwazvo. 24 Ndarama yose yakashandiswa pakuita basa, pabasa rose renzvimbo tsvene yakanga yakaenzana nendarama yechinopiwa chinozunguzirwa,+ matarenda makumi maviri nemapfumbamwe nemashekeri mazana manomwe nemakumi matatu kana tichienzanisa neshekeri+ renzvimbo tsvene.+ 25 Sirivha yevaya vakanyorwa paungano yaiva matarenda zana nemashekeri chiuru chimwe nemazana manomwe nemakumi manomwe nemashanu kana tichienzanisa neshekeri renzvimbo tsvene. 26 Hafu yeshekeri yomunhu mumwe nomumwe yaiva hafu yeshekeri kana tichienzanisa neshekeri renzvimbo tsvene, nokuda kwevanhu vose vaidarika vachienda kune vaya vakanga vakanyorwa vaitangira pamakore makumi maviri zvichikwira,+ vaisvika zviuru zvine mazana matanhatu nezvitatu nemazana mashanu nemakumi mashanu.+ 27 Matarenda esirivha zana akaumbiswa zvigadziko zvenzvimbo tsvene nezvigadziko zveketeni. Zvigadziko zana zvaienzanirana nematarenda zana, tarenda rimwe richigadzira chigadziko chimwe chete.+ 28 Akagadzira hoko dzembiru nemashekeri chiuru nemazana manomwe nemakumi manomwe nemashanu, akafukidza misoro yadzo, akadzibatanidza. 29 Mhangura yechinopiwa chinozunguzirwa yaiva matarenda makumi manomwe nemashekeri zviuru zviviri nemazana mana. 30 Iyi akaishandisa kugadzira zvigadziko zvesuo retende rokusanganira neatari yemhangura nesefa yayo yemhangura, nemidziyo yose yeatari, 31 nezvigadziko zvechivanze chakanga chiri kumativi ose, nezvigadziko zvegedhi rechivanze, nehoko dzose dzetende retebhenekeri nehoko dzose dzetende+ dzechivanze chakanga chiri kumativi ose.